အလုပ်မမြဲကြတဲ့ သူ တွေ . . . . - MYSTERY ZILLION
အလုပ်မမြဲကြတဲ့ သူ တွေ . . . .
January 2011 edited February 2011 in My Article
ဘာလို့ အလုပ်မမြဲကြသလဲ . . ဆိုတာမှာ ပထမဆုံး စအလုပ်လုပ်တဲ့ သူတွေ အလုပ်မမြဲရတာနဲ့ စပြီးပြောချင်ပါတယ်
၁ - ပတ်၀န်းကျင်သစ်ကို ရင်ဆိုင်ရာတွင် ကျဆုံးခြင်း
အိမ်နဲ့ ကျောင်း ပတ်၀န်းကျင် လေးကနေ အလုပ်ထဲ စရောက်တဲ့ သူတွေ . စကြုံရတဲ့ ပြသနာက ပတ်၀န်းကျင်သစ် ပြသနာပါ .
လူတွေ က ကိုယ့်ထက် အသက်ကြီးတဲ့ သူတွေ ၊ ဖုန်းတွေ တဂွမ်ဂွမ်နဲ့ . အားလုံး ကကိုယ့် အလုပ်ကိုယ်ရှုပ်နေကြချိန်မှာ
၁၉ - ၂၀ ကျောင်းပြီးခါစ ချာတိတ် အတွက်တော့ မိနစ်တိုင်းက ဒုက္ခ တွေ ချည်းပါပဲ .
ဘာလုပ်လုပ် သူ့ အတွက် အသစ်တွေ ချည်းပါပဲ . သင်တန်းက သင်လိုက်တဲ့ စာ . တက္ကသိုလ်က သင်လိုက်တဲ့ စာ တွေ နဲ့ လားလားမှ မတူတဲ့ ပြသနာ အသစ်တွေ ချည်းသူကြုံရတာပါ .
ဒီနေရာမှာ လက်တွဲခေါ်မယ့် သူမရှိရင် တစ်ပတ်အတွင်းအလုပ်က ထွက်ပါတယ် . . .
အထူးသဖြင့် မိန်းကလေး တွေ အတွက် စပြီး လုပ်ရတဲ့ အလုပ်က အဖိုက်ခံရ အကိုက်ခံ ရ စောင်းမြောင်းခံရတာတွေ များရင် . အလုပ်များတော့ တော်ပါပြီ ယောကျင်္ားကောင်းကောင်းပဲ ယူတော့မယ် ဆိုတာမျိုးတွေ ဖြစ်သွားပါတယ်
ကိုအီမိုရေ ဆောရီးဂျ။ နည်းနည်း၀င်ပွားမယ်နော်။ အဟဲ
အနော် ပြောချင်တာ။ ပထမဦးဆုံး အလုပ်၀င်တဲ ့အခါ ထားရမဲ ့စိတ်ဓါတ်ပါ။
လူတစ်ယောက်ရဲ ့ဘ၀မှာ ပထမဦးဆုံး အလုပ်၀င်တဲ ့နေဟာ ဘ၀တိုက်ပွဲကို ခြေလှမ်းစတာပါခင်ဗျ။
ကိုယ်ကျင်လည်နေတဲ ့ပတ်၀န်းကျင်နဲ ့ခွဲခွာပြီးလေ။ အဲဒီတော့ကိုယ်ဟာ ကျောင်းသားမဟုတ်တော ့ဘူး။ အိမ်က ခလေးလည်း မဟုတ်တော ့ဘူး။ အလုပ်ရှင်နဲ ့အလုပ်သမား ဖြစ်သွားပြီ။
၁. ဘာမဆို ဇွဲရှိရှိ လုပ်ပါ။
၂. အဆင်မပြေတာရှိလည်း စိတ်မနှစ်ထားပါနဲ ့။ ခေါင်းအေးအေးထားဖြေရှင်းပါ။
၃. အလုပ်ချိန်အပြည် ့မှာ သည်းခံစိတ်မွေးပါ။
၄. မျက်နှာအား အတတ်နိုင်ဆုံး ချိုသာအောင်ထားပါ။
၅. လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပျော်ရွှင်အောင်နေပါ။
ဒီလေးချက်လောက်နဲ ့တင် လုံလောက်ပါတယ်ခင်ဗျ။
နောက်တစ်ခုက လူဆိုတာက အလုပ်လုပ်ပြီဆို နှစ်မျိုးရှိတယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော ့
၁. အမြဲတမ်း အသစ်အဆန်းတွေကို လေ ့လာ၊ လုပ်ကိုင်ချင်နေတဲ ့သူရယ်။
၂. အလုပ်တစ်ခုကို ဇောက်ချလုပ်ကိုင်သွားလိုသူရယ်ဆိုပြီးလေ။
ခင်ဗျားက အပေါ်က နှစ်ခုထဲမှာ ဘယ်ဟာကို လုပ်ကိုင်လိုသူလဲဆိုတာ အလုပ်လုပ်ရင်း ကိုယ်ကိုကိုယ်သိလာပါလိမ် ့မယ်။ အမြဲတမ်း အသစ်အဆန်းလုပ်ရတာ ကြိုက်တဲ ့သူဆိုရင်တော့တစ်စုံတစ်ခုကို အကြာကြီးလုပ်နေရတဲ ့အခါရိုးသွားတတ်တယ်။ အီသွားတတ်တယ်။ အဲဒီတော့အလုပ်ကို သွားရမှာ စိတ်ညစ်လာတတ်တယ်။ မသွားချင်ဘူး။ သွားလည်း ဒါတွေပဲ။ ဆိုတာတွေ ဖြစ်လာတတ်တယ်။ အထိကက ကွန်ပြူတာ သမားတွေ ဖြစ်ကြတာများတယ်။
ဥပမာ။ ။ နက်၀က်သမားလို လူမျိုးဆိုရင် သူအတွတ်က ကွန်ကောင်းနေရင် ရပြီလေ။ ကျန်တဲ ့၀န်ထမ်းတွေ အေးအေးဆေးဆေး မေလ်းအ၀င်အထွက် အဆင်ပြေနေရင် ရပြီ။ အဲဒီလို အချိန်မျိုးတွေကို နေ ့တိုင်းကြုံလာတဲ ့အခါမှာ စိတ်ညစ်စရာတွေ ဖြစ်လာတတ်တယ်ခင်ဗျ။ ဘာဖြစ်လို ့လဲဆိုတော ့သွားတိုင်းထိုင်နေရတာများတာကို ။ ထို ့ကြောင့်
ထိုသို ့သော ပြသနာတွေ ကြုံတွေ ့လာလျှင် အွန်လိုင်းပေါ်သာတတ်ပြီး ကိုယ်အတွတ် ဗဟုသုတရစေမဲ ့၊ ကိုယ်နဲ ့သက်ဆိုင်တဲ့အလုပ်ရဲ့အင်ဖေါ်မေးရှင်းအသစ်အဆန်း တွေသာ ရှာဖွေဖတ်ရှုရန် အကြံပြုအပ်ပါတယ်။
အလုပ်တစ်ခုကို ဇောက်ချပြီး လုပ်သူတွေကတော့အလုပ်မြဲကြပါတယ်။ ဘယ်နေရာရောက်ရောက်လေ။ အဲဒီအတွတ် သိပ်မပြောလိုပါဘူး ။ အနော်ကိုယ်တိုင်လည်း အလုပ်ကို ဇောက်ချပြီး လုပ်ကိုင်နေတဲ ့ထဲမှာ မပါတော ့သိပ်လည်း မသိဘူး ဟီး :P ။ ။
မေသူ ဆိုလို့ လွင်မိုးမိန်းမ မဟုတ်ပါဘူး . အဲ ဖိုရမ်မှာလဲ မေသူ လေး တွေ ရှိရင် တောင်းပန်ပါတယ် .
မေသူ က ဆယ့်ကိုးနှစ်ပါ . အိမ်မှာ လတ်ယားလတ်ယားနေရတာကို အသားကျနေတဲ့ သူ . တစ်ဦးတည်းသောသမီး
မိဘကလဲ ပြည့်စုံတယ် မဟုတ်တောင် အလယ်အလတ်တော့ ရှိသဗျ .
ညဘက် အားရင် ဖုန်းလေးနဲ့ မက်ဆေ့ ပို့ပြီး ကျူလိုက် တခါတလေ အွန်လိုင်းပေါ်တတ်ပြီး . အာချောင်လိုက် နဲ့ ပေါ့ဗျာ .
ဒီလိုနဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် က သူ အလုပ်ရကြောင်း ဘယ်ကုမဏီမှာ ဘာလုပ်ရကြောင်း ရွန်း၇ွန်းေ၀ ကြွားတာကို ခံလိုက်ရပါတယ် . ကောင်မ ငါ့ ကြွားသွားတယ်ပေါ့ . သူနဲ့ငါ အရည်အချင်းခြင်း အတူတူ ပဲ . ငါလဲ အလုပ်ရရမှာပေါ့ ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ လက်ထဲ မှာ ရှိတဲဲ့certificate တွေ ဘွဲ့တွေ အားကိုးနဲ့ အလုပ်လိုက်လျှောက်ပါတယ်
ကံဆိုးချင်တော့ မရဘူး . CV ဖိုးသာ ကုန်တယ် မေသူ အလုပ်မရဘူး . လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ မရှိဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ တင် မေသူ အပယ်ခံရတယ် . ရုပ်ရည်ကလဲ အလန်းစား ကြီး မဟုတ်တော့ အတွင်းရေးမှုးရာထူးလေး ကို မမှန်းရဲဘူး .
ဒါနဲ့ အလုပ်မရှိတော့ စိတ်ဓါတ်ကျသလိုလို ဖြစ်စပြုလာပါတယ် . . . သူများတွေ ထမင်းချိုင့်လေးတွေ ဆွဲပြီး အလုပ်သွားတာမြင်ရင် ထမင်းချိုင့်နဲ့ အထုခံရသလို ရင်နာစပြုလာပါတယ် . .
( ဒီနေရာမှာ အလုပ်လျှောက်လို့ မရသူတိုင်း ဖြစ်တတ်တဲ့ သဘော ပါ . သူတို့ စိတ်ထဲ အလုပ်ရမှ ဒီ အိပ်မက်ဆိုးက လွတ်မယ် ထင်ကြပါတယ် . . အလုပ်ရရင် အားလုံး အိုကေပြီ ဆိုပြီး တွေ့ ရာ အလုပ် ကိုယ်နဲ့ မဆိုင်တဲ့ အလုပ်တွေကို လျှောက်ကြပါတယ် )
( တချို့ က hardware သမား ၊ အလုပ် က ဘယ်မှာ လျှောက်လျှောက်မရဘူး . ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ကွာဆိုပြီး marketing လျှောက်လိုက်တာ ခန့် ရော . အဲဒီ မှာ အလှည့်အပြောင်းဒဏ်မခံနိုင်ရင် . . အလုပ်ထွက် . နောက် အလုပ်ရှာမယ် . ဆိုပေမယ့် . အဲဒီ ထွက်ခါစနဲ့ ရှာနေဆဲ ကလမှာ depression ဆိုတဲ့ စိတ်ကျရောဂါရနိုင်ပါတယ် )
အခုက မေသူလေး အကြောင်းဆက်ကြစို့ရဲ့ ...
အဲ . မေသူလေး လဲ နည်းနည်းတော့ တင်းလာပါတယ် . ဘာလဲပေါ့ . ဒါနဲ့ အရည်အချင်း လို သေးလားဆိုပြီး သင်တန်း တစ်ခု ထက်တက်ပါတယ် . ကိုယ်နဲ့ ဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင် ကိုယ်၀ါသနာပါပါ မပါပါ . . အဲဒီ certificate ရမှ အလုပ်ရမယ် လို့ ထင်ပြီး အဲဒီ ရေပန်းစားသော တစ်ခုသော သင်တန်းကို တက်ပါတယ် .
( ဒီနေရာမှ သူ ကံဆိုးပြီး တက်တဲ့ သင်တန်း က သူနဲ့ အဆင်မပြေဘူး ဆိုရင် မေသူ သင်တန်းတက်စားတဲ့ ဘ၀ရောက်ပြီး ဖြစ်တော့ မှာမို့လို့ . မေသူ တက်တဲ့ သင်တန်းကို စိတ်၀င်စားစွာ နဲ့ တကယ်တတ်ပြီး အောင်မြင်လာတယ် ပဲ ထားကြရအောင် )
မေသူ လက်ထဲ က certificate အားကိုးနဲ့ အလုပ်လျှောက်ပါတယ် . accountant ပဲ ထားစို့ ဗျာ .
junior account ပေမယ့် မေသူ့ ဘ၀က ၀င်၀င်ခြင်း ဘောက်ချာတွေ ပတ်လည်၀ိုင်းလို့ စာအုပ်တစ်ထပ်ကြီး ထဲ မှာ မျောနေရပါတယ် . ရှင်းပြပေမယ့် သူတွေ ကလဲ သူ့ အပိုင်းနဲ့ သူ တောင် မနိုင်၊ ထမင်းစားချိန်မှာ လဲ သူ့ လူနဲ သူတွေ ချည်း ၊ မန်နေဂျာ မိန်းမကြီးကလဲ ဟောက်တာခံရပါသေးတယ် .
အံသြတယ် . အိမ်မှာ သူ့ကို အဲဒီလို ပေါ်တင်ကြီး ဟောက်တာ မခံရဘူး ပါ .
ထမင်းစားရချိန်မှာတောင် အသက်ရှုျကျပ်နေသလို ခံစားရပါတယ် .
နောက် မကြာပါဘူး မေသူ အစာအိမ်အောင့်တဲ့ ရောဂါခံစားရပါတယ်
( အလုပ်မရှိတဲ့ သူ တွေ က အလုပ်ရှိတဲ့ သူတွေ ကို အားကျတယ် . မိုက်တယ် ကွာ မင်းက အလုပ်နဲ့ လို့ ပြောတတ်ကြတယ် . အလုပ်ထဲမှာရင်ဆိုင်ရတာတွေ . ဒုက္ခတွေကို သူတို့ မသိကြပါဘူး .
သူတို့ အိပ်မက်ကမ္ဘာထဲ မှာ ပဲ သူတို့ တွေးသလို ထင်သလို အလုပ်ထဲမှာ ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ကြပါတယ်.
အဲဒီတော့ အလုပ်လုပ်မယ့် သူတွေ ကို ပြောပြချင်တာက အလုပ် ဟာ အိပ်မက်ထဲကလို ရုပ်ရှင်ထဲ ကလို ရွှေမင်းသားမင်းသမီးတွေ လုပ်ပြသလိုမျိုး ဖြစ်လာမယ်လို့ မမျှော်လင့် ပါနဲ့ .)
. နို့မို်ဆို . ရင်
မေသူ့လို အစာအိ်မ် ပြသနာကို အကြောင်းပြလို့ အလုပ်ထွက် . နောက် အလုပ်ပြောင်း . .
ဘတ်စ်ကားစီးရတာေ၀းတာကို အကြောင်းပြလို့ အလုပ်ထွက် . နောက် အလုပ်ပြောင်း . .
နိုင်ငံခြား သွားတော့ မယ် ဆိုတာကို အကြောင်ပြလို့ အလုပ်ထွက် . . နောက် အလုပ်ပြောင်း .
ဆိုတာလို သူ့ အိပ်မယ် ကမ္ဘာ နဲ့ ကိုက်မယ့် အလုပ်ကို ရှာရင်း အလုပ်မမြဲ သူ တစ်ယောက် ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကို ပြောရင်း . အလုပ်စလုပ်တဲ့ သူတွေ အလုပ်မမြဲရခြင်း အကြောင်းကို နားကြစို့ . .
နောက်နေ့ကြမှ . အလုပ် လုပ်ဖူးပြီးသားလူတွေ ဘာလို့ အလုပ်မမြဲရသလဲ ဆိုတာကို ဆက်ရေးပါ့မယ်
အလုပ်ရှိတဲ့ သူတွေ အလုပ်ထွက်ရတဲ့ ပထမဆုံး အကြောင်းအရင်း ကတော့ လစာနည်းတယ်လို့ ခံစားရလို့ဖြစ်ပါတယ်
တချို့က တော့ ရာထူး မတိုးလို့ ဆိုပြီး ထွက်ကြပေမယ့် အများစု က တော့ လက်ရှိအလုပ်က လစာနည်းတယ်လို့ ခံစားရလို့ဖြစ်ပါတယ်
လူတစ်ယောက် အကြောင်းပြောကြစို့ .
သိန်းသန်းလေး က အသက် ၂၅ နှစ် . လက်ရှိ အလုပ်အကိုင် က network engineer ဖြစ်ပါတယ် လုပ်သက် က တစ်နှစ်မကျော်သေးတော့ လစာက သောင်းဂဏန်းပဲ ရပါတယ်
တနေ့ သူ့ လိုပဲ network engineer သူငယ်ချင်းနဲ့ . အပြင်မှာ ဆုံရင်း စကားပြောမိတဲ့ အခါ သူက လစာဘယ်လောက်ရကြောင်း ၊ သူဌေးက ဘယ်လို ၊ ရှေ့အလားအလာက ဘယ်လို စတာတွေ ကြားရတဲ့ အခါ သိန်းသန်းလေး ရဲ့ ဦးနှောက်ထဲကိုယ် Logical operator ( နှိုင်းယှဉ်စဉ်းစားတယ် လို့့့ပဲ အလွယ် အဓိပ္ပါယ်ပြန်လိုက်ပါတယ် ) တစ်ခု က ၀င်လာပါတော့တယ်
လစာ ၆၀၀၀၀ = = လစာ ၁၂၀၀၀၀
သူဌေး == ဘောစိ
ပြည်တွင်း အလားအလာ == ပြည်ပ အလားအလာ .
သူဌေးနဲ့ ဘောစိ မတူဘူးလား မေးစရာရှိပါတယ်
သူဌေး နဲ့ ဘောစိ မတူပါ . . ခင်ဗျာ . သူဌေး က နိုင်ငံခြားမသွားဘူး ပါဘူး . မယားငယ် ယူပါတယ် . ဘောစိက တော့ ရှင်းတယ် . ပြည်ပနိုင်ငံတစ်ခုခု က ပြန်လာတာ . အဲ မယားငယ် အတည်မယူပါဘူး .
( ဟီးဟီး ကိုယ့်လူတို့ ဖတ်ရတာ ပျင်းမှာ စိုးလို့ နောက်တာ နော် )
အဲဒီတော့ ဆက်ရရင် သိန်းသန်းလေး စိတ်ထဲ သိန်းနဲ့ သန်းနဲ့ ချီပြီး စဉ်းစားပါတယ် . ငါတော့ အခု ကုမ္မဏိီမှာ ဆက်လုပ်နေရင် ရှေ့ဆက်ပြီး ဘာဖြစ်မလဲ
ဒီလိုပဲ သောင်းဂဏန်း လေးနဲ့ လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေမှာပဲ .
အလားအလာက လဲ နိုင်ငံခြား လွှတ်ဖို့ မပြောနဲ့ ဒလ တောင် သွားရမှာ မဟုတ်ဘူး .
သူဌေးကလဲ အားအားရှိ ငါ့ ပဲ ခိုင်းနေတာပဲ .
စ သဖြင့် သူ နာတယ် လို့ ထင်တဲ့ ဘက်ကချည်း သူတွေးပါတယ် . ( လူဆိုတာ ကိုယ့်ဘက် ကိုယ်ယက်တယ်မဟုတ်လား ) . .
ဒါနဲ့ သူအလုပ်ထွက်ပါတယ် . နောက် အလုပ်ကိုရှာပါတယ် .
ပထမ အချက် သူ နှိုင်းယှဉ်တဲ့ သူ့့ သူငယ်ချင်းလို မျိုး သူအလုပ်ကထွက်ရင် အဲဒီလို တန်းဖြစ်မယ် ထင်နေပါတယ်
ဒုတိယ . .သူ့သူငယ်ချင်း က သူနဲ့ အရည်အချင်း ချင်း တူတယ်လို့ သူထင်နေပါတယ်
( သူလောက်တော့ ငါလဲ တတ်တာပေါ့ .ဒီကောင် ငါ့လောက်တောင် မတော်ပဲ နဲ့ ပိုက်ဆံဒီလောက်ရနေတယ် . အမှန်ဆို ငါက ပိုရသင့်တာပေါ့ ) သူ အဲဒီလို တွေးပါတယ်
အမှန်က လောက မှာ ကိုယ်နဲ့ ထိုက်လို့ ရတဲ့ သူတွေ များပါတယ် . ကိုယ်နဲ့ မထိုက်ပဲ ရရင် အဲဒီလူ ဆီ မှာ အဲဒီအရာက ခဏပဲခံမှာပါ
အဲဒီတော့ ဗျာ . အလုပ်ရှိပေမယ့် အလုပ်မမြဲ့ကြရတဲ့ ၁- လစာနည်းသည်ဟု ခံစားနေရ၇င်
ကိုယ့်လူ အနေနဲ့ ပထမ စဉ်းစားရမှာ က ကိုယ့် အရည်အချင်း ကိုယ် သိဖို့ ဖြစ်ပါတယ် .
နောက် အားအား ရှိ နောက်အလုပ် ကအခု အလုပ်ထက် ကောင်းမယ်လို့ မမျှော်လင့်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ် .
( ပြည်တွင်း ဖြစ်စေ ပြည်ပဖြစ်စေ သူဌေး တွေက တော့ သူဌေးလိုပဲ ဆက်ဆံမှာပါ . )
နောက်ထပ် ထပ်ရေးပါအုံးမယ် .
အနော် အမြင်လေးကို ဝင်ပြောပါရစေ ခင်ဗျ။ အနော် ကတော့ လူတစ်ယောက် ဟာ မိမိဝါသနာနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အလုပ်ဆိုရင် တော့အချိန်တစ်ခုထိမြဲမယ် ထင်တာပဲ ဒါပေသည့် အလုပ်ရှင်ကတော့ သဘောထား အတန်အသင့်လေးတော့ ပြည့်ဝရမည်ပေါ့ နော်။ ၀ါသနာပါပေမယ့် ကြာလာတော့လဲ ပျင်းလာတာပေါ့ ဆိုတာ ကတော့ တကယ် ဝါသနာမပါလို့လျှောက်ပြော နေတာပါ။ တကယ်တော့ ဝါသနာပါရင် ဘယ်နှစ်ခါလုပ်ရလုပ်ရ ပျော်နေ တက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မိမိ ကနဦးစ လုပ်တဲ့ အလုပ် မှာလခကိုအရမ်းမျှော်မှန်း မထားပါနဲ့ ဘာကြောင့်လဲဆိုတောပ မိမိမှ အလုပ်သက် အတွေ့အကြုံမရှိုသေးတာပဲ။ မိမိ အလုပ်ကိုသာကြိုးစားလုပ်ပါ။ များသောအားဖြင်ပေါ့နော် ဘယ်အလုပ်ရှင်မဆို ရိုးသားကြိုးစားပြီး လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့လူ တစ်ယောက်ကို တခြားသော သူတပါး ကုမ္ပဏီ ကိုအရောက်ခံ မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်သင်အလုပ်မှာ ပျော်လာအောင် အခြားသောကုမ္ပဏီ များသို့ မပြောင်းအောင် လခ(သို့)ခံစားခွင့်များ တိုးမြှင့်ပေးချင်းဖြင့် သင့်ကို မြှုဆွှယ်ထားပါလိမ့်မည် သို့ဖြစ်သောကြောင့် စစချင်းမှာ လခနည်းခြင်းကို စိတ် မပူူပါနှင့် လခ(သို့)ခံစားခွင့်များ မှာ သင်ဧ။် ကြိုးစားမှုအရည်းအချင်း စသည်တို့နှင့် ပဲဆိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အလုပ်လုပ်မည် ဆိုပါက မိမိဘာဝါသနာပါလဲအရင်စဉ်းစားပါ ပြီးနောက် ထိုအလုပ်ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်် တက်မြောက်ထားရမည်။ ပြီးမှ ထိုအလုပ် ကိုသွားလျှောက်ပါ။ အထက်ပါအချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါက သင်ဧ။် အလုပ်မှာ သင်မုချ ပျော်ပေလိမ့်မည််။ ဟဲ…..ဟဲ အနော် မြင်တွေတော့ ရေးချပြီးတွားပြီ။ မှားတာရှိက အမှန်သို့ တည့်မက်ပေးကြပါ ခင်ည…….
ကျေးဇူးပဲ ကိုemo ... ခုမှကျောင်းပြီးလို ့အလုပ်ရှာနေတာဆိုတော့ .. ကိုemo ရဲ ့ဆောင်းပါးလေးတွေက အတော်လေးကိုအသုံး၀င်ပါတယ် .. ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အားဆေးပေါ့ .. ဟဲဟဲ ..
ကျောင်းပြီးတာ က မြန်မာစာ မေဂျာ ကျွမ်းကျင်တာ ဖွန်ကြောင်တာ ၀ါသနာပါတာက ဘာမှပါဘူး။ လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်က လည်း သိပ်မကြီးပါဘူး bill gate တို့လို ဒါမှမဟုတ် defcon လို organization founder :cool:လိုလို ဘာလိုလိုပေါ့ .. လက်ရှိ တတ်ထားတာက KMD က typing အောင်လက်မှတ် .. CV ရေးပြီး အမေရိကားထွက် အလုပ်ရှာမလို့ .. American lottery လည်းထိုးထားတယ် ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်နော်..ဗေဒင်ဆရာကလည်းဟောထားတယ် ...လုပ်သင်နဲ့ လုပ်သက် ကလည်း နည်းပါဘူး internet ဆိုင် နှစ်ဆိုင်မှာ နှစ်နှစ် ၀င်ပြီး လုပ်အားပေးထားတယ် .. ဘာကနေဘယ်လို စလုပ်သင့်လည်း အကြံပေးကြပါ..:106::106:
အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင် အကြံပေးချင်တာက တကယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အလုပ်စလုပ်မလား အလုပ်သင်စလုပ်မလား အရင်စဉ်းစားပါ။ ကောင်းတာကတော့ ကျောင်းပြီးကာစမှာ အလုပ်သင်ဖြစ်ဖြစ်တော့ စမ်းလုပ်သင့်ပါတယ် ကိုယ်တိုင်ကတော့ ဆော့ဝဲအင်ဂျင်နီယာဆိုတော့ အဲဒါနဲ့ပါတ်သက်တာပဲ နမူနာပေးတတ်ပါတယ်။
အလုပ်သင်ဆိုတာ ဆောဝဲရေးတဲ့ကုမ္ပဏီမှာ အလုပ်သင်ဆိုပြီးလုပ်တာလည်း ဖြစ်နိုင်သလို ကိုယ်တိုင်ပဲ ယုံကြည့်မှု့ရှိတဲ့အထိ ကိုယ်ပိုင်ပရောဂျက်တွေ လုပ်လည်းဖြစ်တာပါပဲ အရေးကြီးတာက အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ချက်ရှိဖို့အထိ လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ အလုပ်သင်ဖြစ်တော့ ကိုယ့်အရင်စီနီယာတွေဆီကနေ အကူအညီရနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်နိုင်ပါတယ်။ လုပ်တာလွဲသွားလို့လည်း သိပ်အဆူမခံရနိုင်ပါဘူး အလုပ်မလုပ်တတ်ဘူးလို့ပဲ သူတို့အနေနဲ့ကသိထားပါတယ် အဆူခံရတောင် ခံသာပါသေးတယ် ဘာမှဖြစ်ပါဘူး။ အလုပ်သင်ဖြစ်လို့ လခကလည်း လက်ဘက်ရည်ဖိုးလောက်ပဲ ရတာဖြစ်လို့ အလုပ်ရှင်နဲ့လည်း ငွေကြေးကိစ္စအရှုပ်အရှင်း ဘာမှမရှိသလို သိပ်ပြီးတော့လည်း သူ့ဆန်စားရဲတယ်ဆိုသလိုလည်း ခံစားနေစရာမရှိတော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။
အလုပ်သင်ဘဝမှာ အလုပ်သဘောကို နားလည်အောင်ကြိုးစားပါ အလုပ်သင်လည်း ခိုင်းတာကတော့ခိုင်းမှာပါပဲ ငါ့ပဲခိုင်းတယ်လို့မအောင့်မေ့ပါနဲ့ မလုပ်တတ်လို့လုပ်တတ်အောင် သင်နေရတာပါ။ ကျောင်းမှာက လော့ဂျစ်အလုပ်လုပ်အောင် လေ့ကျင့်ခဲ့နိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် Problem Solving ကတော့အလုပ်မှာပဲ ကြုံလာမှလုပ်ရင်း တိုးတက်ရတာပါ အဲဒါကိုအလုပ်သင်ဘဝမှာ Problem Solving ကိုတီးမိခေါက်မိလာဖို့ လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာ ကိုယ်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာ ကိုယ်ဘယ်လိုရှင်းရတယ် သဘောပေါက်လာမှာပါ။ ကိုယ်တိုင် ပရောဂျက်လေးတွေ ယူလုပ်တယ်ဆိုလည်း ဗမာပြည်လိုမှာက အဲလိုစမ်းစရာနေရာတွေ ပေါပါသေးတယ် အသိမိတ်ဆွေ အလုပ်တွေမှာ သုံးဖို့အတွက် ဆော့ဝဲတွေစမ်းရေးပေးမယ် သုံးကြည့်ပေးမလား ပြောရင်အလကားရတာပဲ သုံးကြပါတယ်။ ဒါဆိုရင်လည်း တကယ်သုံးမှဖြစ်လာမယ့် ပြဿနာတွေ တစ်ပုံကြီးဖြစ်တတ်မှန်း အတွေ့အကြုံရပါတယ်။ အနည်းဆုံးတော့ ငါ့အိမ်ကစက်မှာတော့ အလုပ်လုပ်နေတာပဲ နင့်စက်ထဲထည့်လိုက်မှ အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာကမျိုးကနေ ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် ရှင်းရတတ်ပါတယ်။ အဲလိုပြဿနာတွေဟာ ကိုယ့်ဘဝအတွက် အဖိုးတန်ပါတယ်။
အလုပ်သင်ဘဝကို ယုံကြည်ချက်တစ်ခု ရပြီဖြစ်လို့ရပ်တန့်တော့မယ်ဆိုရင် ငါအလုပ်လုပ်နိုင်ပြီလားလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆုံးဖြတ်ပါ ကိုယ်တိုင်မှမယုံကြည်ရင် တစ်ခြားလူလည်းမယုံကြည်ပါဘူး။ အလုပ်မှာအကူအညီ ရချင်လည်းရမယ် မရချင်လည်းမရပါဘူး လူတိုင်းကိုယ့်အလုပ်နဲ့ မအားကြပါဘူး ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ပြဿနာ ကိုယ်ရှင်းမယ်လို့ခံယူပါ အလုပ်ကကိုယ့်ကိုသင်သွားမယ်လို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့ အလုပ်ရှင်ဟာတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူပါဘူး တစ်ချို့ကလည်းတန်ရုံမလုပ်နိုင်လည်း တစ်ဖြည်းဖြည်းခိုင်းလို့ရမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် တစ်ချို့ကတော့ ခိုင်းမရရင်ပြန်ဖြုတ်ပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်ရှင်ဘက်ကကြည့်ရင် အဲဒါဟာမမှားပါဘူး အလုပ်ခန့်တယ်ဆိုတာ အကျိုးစီးပွားတစ်ခုအတွက် တန်ကြေးတစ်ခုပေးခိုင်းတာပါ ခိုင်းမရရင်အရှုံးပေါ်ပါတယ် အဲဒါကြောင့် ဖြုတ်ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့်တကယ်လုပ်မယ့် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုတာ ဒုက္ခသယ်ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းမဟုတ်ဘူးလို့သာ စိတ်ထဲမှာထားပါ။ အလုပ်ဟာ ကိုယ့်လုပ်အားနဲ့ လုပ်ငန်းရဲ့အကျိုးအမြတ်ကို ရှာဖွေနဲ့နေရာလို့ပဲခံယူပါ မေတ္တာတွေ စေတနာတွေ နဲ့ပြည့်နေတဲ့နေရာလို့ မမျှော်လင့်ထားပါနဲ့ မျှော်လင့်သလိုမဖြစ်လာရင် စိတ်ညစ်ရပါလိမ့်မယ်။
အလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင်လည်း အလုပ်ချိန်ထက်တစ်ခါတစ်လေ ပိုလုပ်ရတာရှိနိုင်ပါတယ် ဒါကိုလည်းတစ်ခါ တစ်ယံမှာတော့ လိုအပ်ခဲ့ရင်လက်ခံရပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ အလုပ်ချိန်ပြည့်ရင် ပြန်လို့ရပါတယ် ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရှေ့ရေးအတွက် တည်ဆောက်ချိန်မှာ တန်းတူလူတွေထဲမှာကိုယ့်ထက် ပိုလုပ်တဲ့လူရှိရင် ကိုယ့်ကိုကျော်တက်မှာပါ ဒါတွေကိုလည်း စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ အမြဲတမ်းတော့ လုပ်နေရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူး လိုအပ်ရင်လုပ်တယ် မလိုအပ်တဲ့အခုတော့လည်း မလုပ်ဖူးပေါ့။ အရေးကြီးတာက ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ဟာ လုပ်ငန်းတွက် အရေးပါလေလေ ကိုယ့်အတွက်တိုးတက်လမ်း ပိုရှိလေလေပါပဲ ဒါကတော့ တစ်ခါတစ်ယံ ပင်ပန်းချင်ပင်ပန်းမယ် တာဝန်ယူရတာများလာမယ် ဒါပေမယ့်ကိုယ့်အတွက် တက်လမ်းပိုလာတယ် ဒါပေမယ့် ပါးရည်နပ်ရည်ရှိဖို့လည်းလိုပါတယ် များများလုပ်လို့များများ တိုးတက်တယ်တော့ မဆိုလိုပါဘူး။
နောက်တစ်ခုက အခွင့်အလမ်းဆိုတာမှာလည်း ဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းအတာရှိပါတယ် ဗမာပြည်မှာလုပ်ရင် ဗမာပြည်ကရနိုင်တဲ့ လစာအတိုင်းအတာပဲ ရနိုင်ပါတယ် အဲဒါကိုတော့ ငါလုပ်ရတာက တစ်ခြားနိုင်ငံမှာဆို ဘယ်လောက်တန်တယ်ရယ်တော့ တွက်ချက်ပြီး လုပ်ရတာမတန်ဘူးလို့ မစဉ်းစားပါနဲ့ အဲဒါကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ တစ်ခြားနိုင်ငံကလစာမျိုးလိုချင်ရင်တော့ တစ်ခြားနိုင်ငံရဲ့အလုပ်ကို ပြောင်းဖို့ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်။ အရေးကြီးတာက ကိုယ့်အလုပ်မှာကိုယ် အကောင်းဆုံးလုပ်နေဖို့သာ လိုအပ်ပါတယ် ဒါပေမယ့်ကိုယ်လုပ်ပေမယ့် ကိုယ့်ဆီမှာရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးလောက် မရလာခဲ့ရင်တော့ အလုပ်ထွက်သင့်ပါတယ်။
အလုပ်မြဲတယ်ဆိုတော့လည်း စဉ်းစားစရာရှိပါတယ် ပြောင်းတိုင်းမကောင်းသလို မြဲတိုင်းလည်းမကောင်းပါဘူး။ ပြောင်းတိုင်းမကောင်းတာက ကိုအီမိုပြောသလို မပျော်ဘူးဆိုပြီး လျှောက်ပြောင်းနေတယ် ဒါမျိုးကမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ မပြောင်းတိုင်းမကောင်းတာက နေရာတစ်ခုမှာ ကိုယ့်အတွက်အခွင့်လမ်း ရနိုင်ချင်မှရနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်ရှေ့မှာ အင်မတန်တော်တဲ့ ဆော့ဝဲအာခီတက် တစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုရင် ကိုယ်အနေနဲ့အဲဒီ့ အလုပ်မှာအဲဒီ့နေရာ ရဖို့မလွယ်ပါဘူး အဲဒီတော့ကိုယ်က သူနဲ့အလုပ်လုပ်ရင်း သူ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစား ပြီးရင်တော့ ကိုယ့်အတွက်နေရာရှိမယ် အလုပ်တစ်ခုကိုပြောင်းမှရပါမယ်။
အလုပ်တစ်ခုကနေ တစ်ခုအပြောင်းမှာ ဘာလို့ပြောင်းသလဲဆိုတာ အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ် အချိန်ပိုလုပ်ရလို့ လခကနည်းလို့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ ကူညီမယ့်လူမရှိပဲ ခိုင်းတာများလို့ မန်နေဂျာနဲ့ အဆင်မပြေလို့ဆိုရင် နောက်အလုပ်လည်း ဒီလိုပဲဖြစ်နေမှာပါ။ ပြောင်းရင်မျက်နှာပန်းလှလှနဲ့ ရင်ကော့ပြီးပြောင်းပါ အလုပ်အသစ်ရဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ငါအရင်ကအလုပ်မှာ ဘယ်လိုပရောဂျက်တွေ လုပ်ခဲ့တယ် ဘယ်လောက် အောင်မြင်အောင်လုပ်ခဲ့တယ် မင်းတို့အလုပ်မှာ ငါအကျိုးအမြတ် ဘယ်လောက်ရှိအောင် လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ပြောပါ သက်သေအနေနဲ့ ငါ့အရင်အလုပ်ရှင်ကို မေးနိုင်ပါတယ်လို့ ပြောနိုင်အောင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါ။ အလုပ်ရှင်အသစ်အနေနဲ့လည်း ဒီလိုလူတစ်ယောက်ကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ လက်ခံမှာပါ။ အလုပ်ရှင်အဟောင်းနဲ့ လက်ရှိအလုပ်တွေ အကုန်လက်စသတ်ပြီး မျက်နှာပန်း လှလှလမ်းခွဲခဲ့ပါ ဒါဟာကောင်းသော လမ်းခွဲခြင်းနဲ့ အလုပ်ပြောင်းခြင်းပါ။
အလုပ် ရှိတဲ့ သူတွေ အလုပ် မမြဲ ရတဲ့ နောက်တစ်ချက်က တော့ ငြီးငွေ့လာလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ် .
ပုံမှန်အားဖြင့် ငြီးငွေ့ ပြီး အလုပ်ထွက်ကြတဲ့ လူတွေ ဟာ မိသားစု ကို သိပ်ငဲ့စရာမလိုတဲ့ သူတွေ ဖြစ်ပါတယ် .
ဘာမှ သိပ်ငဲ့ကွက်စရာမရှိတဲ့ သူတွေ မိဘက ပြေလည်တယ် ဆိုတဲ့ သူတွေ ဖြစ်ပါတယ် . .
လူတိုင်း က အလုပ်လုပ်ရတာ ကြာရင် ငြိီငွေ့ကြတာ ထုံးစံ ပါ . ဒါပေမယ့် အထည်ချုပ်စက်ရုံက အလုပ်သမ မိန်းကလေးတွေ ကတော့ တစ်လ သုံးသောင်း ၀န်းကျင်ပဲ ရတာကို တောင် မပင်မပန်း မငြီး မငွေ့ လုပ်နေကြရတာကို သိစေချင်ပါတယ် . တခြားဟာတွေ လျှောက်နှိုင်းယှဉ်ရရင်တော့ ဥပမာ အများကြီးပေါ့ . .
ထုံးစံ အတိုင်း ဥပမာ လေးနဲ့ ပြောချင်ပါတယ် .
မောင်ဒီပါ က Programmer တစ်ယောက်ပါ . ရုံးမှာ အားလုံးနဲ့ လဲ အဆင်ပြေတယ် လုပ်သက် ကလဲ အသင့် အတင့် ရှိပါတယ် . လစာ ကလဲ မြန်မာ ပြည် အနေနဲ့ ဆို မဆိုးဘူး ခေါ်ရမှာပေါ့ . .
တနေ့ တနေ့ ရုံးလာ . .project ရှိရင် ရေး . အားရင် အားသလို လက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေး ထိုင် လိုက် အင်တာနက်မှာ ချက်လိုက်နဲ့ ကြာတော့ သူ ဒီ အလုပ်ကို ငြီးငွေ့လာပါတယ်
နောက်တစ်ယောက် က မသီတာ ပါ . ဟဲဟဲ ဒီပါပြီးတော့ သီတာပေါ့ဗျာ .
သူက တော့ Accountant တစ်ယောက်ပါ. LCCI လဲ အောင်ပြီးပြီ . ကွန်ပြူတာ စာရင်းကိုင် software တွေကို လဲ ကျွမ်းကျင်ပါတယ် သူဌေးကလဲ အားကိုးပါတယ် . လစာကလဲ မဆိုးပါဘူး . ဒါပေမယ့် သူကလဲ ငြီးငွေ့ ပြန်ပါသတဲ့ .
အားလုံး အဆင်ပြေတာကို တောင် ငြိီးငွေ့ကြရင် သိပ် အဆင်မပြေတပြေ တွေ ဆိုရင် ပိုဆိုးတာပေါ့ .
အထူးသဖြင့် သိပ် ငဲ့ ကွက် စရာ မလိုတဲ့ လူ တွေ ပိုက်ဆံ အကြောင်း သိပ်မတွေးရတဲ့ သူ တွေ က အလုပ်မမြဲ ကြတဲ့ သူတွေ ထဲမှာ ထိပ်ဆုံးက ပါပါတယ် သူတို့ မှာ လဲ အကြောင်းပြချက် အစုံအလင် ဆင်ခြေ အစုံအလင် ကိုယ်စီနဲ့ ပါ. .
တနေ့ တနေ့ ဒါတွေ ချည်းပဲ လုပ်နေရတယ်
ကိုယ့် လိုင်း မဟုတ်တာ ကို လာခိုင်းတယ်
( ဒီ နေရာမှာ ကိုယ် ရောက်နေတာ မြန်မာ ပြည် ၊ မြန်မာပြည် က သူဌေး ဆိုတာ မမေ့ ပါနဲ့ - - -
မြန်မာပြည်ရဲ့ ထုံးစံ အတိုင်း ခန့်ထားတဲ့ ရာထူးနဲ့ မဆိုင်တာ တွေ ခိုင်းပါလိမ့်မယ် ဒါကို ရင်နာစရာ လို့ မတွေးပါနဲ့ .
အိုင်တီ သမားကို တမြက်စည်းတော့ မလှည်းခိုင်းပါဘူး . . .
Accountant ကို ထမင်းချိုင့်တော့ မဆေးခိုင်းပါဘူး . . .
အကယ်လို့ လုပ်ခိုင်းရင် တော့ ပညာရှင် မာနကို ပြပေါ့ . ဒါက တပိုင်း . အဲဒါလဲ သပ်သပ်ထပ်ရေးအုံးမယ် .
နောက်ဆုံးတော့ ငြီးငွေ့တာကို တိုးတက်မှုမရှိဘူး နိုင်ငံခြားထွက်မယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ အလုပ်ကထွက်ပါတယ် . .
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ခရီးသွားကုမဏီတစ်ခု မှာ ငယ်ငယ်တုန်းက လုပ်ဖူးပါတယ် .
အိုင်တီ သမားပါ . ဒါပေမယ့် လေယာဉ်လက်မှတ် ၀ယ်ဖူး တင်ဖူး . ပါတယ် .
ဘာဖြစ်လဲ လေယာဉ်ရုံး ရောက်ဖူးတာပေါ့ . Sakura tower ပေါ်တက် MAI ထဲ ရောက်ဖူးတယ် လို့ ပဲ သဘောထားပါတယ် .
ပုံနှိပ်တိုက် ၀င် ၊ စက္ကူထုပ်တွေသယ် ၊ ဖလင်ဖောက် . အကုန်လုပ်ဖူးပါတယ် .
ဘာဖြစ်လဲ ပုံနှိပ် လုပ်ငန်း တစ်ခု ရဲ့ လုပ်ငန်း အဆင့်ဆင့် ကို သိတာပေါ့ . အဲဒီလို ပဲ တွေးပါတယ်
အလုပ်တစ်ခု လုပ်မယ် ဆိုရင် စဉ်းစားစရာက အဓိ က သုံးချက်ရှိတယ်လို့ မှတ်ဖူးပါတယ် .
ပညာရသလား ၊ အတွေ့ အကြုံရသလား ၊ ပိုက်ဆံရသလား .
ပညာ မပြည့်၀သေးရင် ၊ အတွေ့့ အကြုံ မပြည့်၀သေးရင် ငြီးငွေ့နေလဲ ဆက်သည်းခံ ရမှာပါ .
ပိုက်ဆံရသလား ကို နောက်မှာ ထားရတာက ပညာ နဲ့ အတွေ့ အကြုံ ရှိရင် ပိုက်ဆံ က အလိုလို လာပါလိမ့်မယ် .
ကို်ယ့်လူ လဲ မောင်ဒီပါလို အလုပ်မှာ ငြိီးငွေ့နေရင် အပြောင်းအလဲကို ရှာပါ . . ထပ်လေ့လာစရာ ဆိုတာ အမြဲရှိနေပါတယ် . ကို်ယ့်ဘက် က ၀မ်းစာပြည့်ရင်တော့ တခြား ပိုမြင့် မယ့်အလုပ်ကို ရှာပါ . .
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် . . ၀ိုင်းဆွေးနွေးပေးကြပါအုံး .
ဆရာ...ကျွန်တော်လည်း ခပ်ဆင်ဆင် မဟုတ်ဘူး.....တစ်ပုံစံတည်းကို လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ် :P
လူဆိုး လူဆိုး ငါ့ အကြောင်းတွေ မဖော်နဲ့ နော် . . တူမှာပေါ့ . တူတူပဲကိုး .. တွေး မိတိုင်း အော် ငါ Kyishaung ကို တော်တော်ပို့ခဲ့တာပါလား လို့ . ဟိဟိဟိ
အနော်၀င်ပြီး ဆွေးနွေးချင်တာ တစ်ခုက ၀န်ထမ်းအချင်းချင်း အလုပ်လုပ်ရာမှာ ဖေးဖေးမမလုပ်ပြီး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို အလုပ်ထဲက နှုတ်ထွက်မယ့် အခြေအနေက ၀ုိင်းထိန်းပေးဖို့ပါ. အလုပ်နဲ့ ပါစယ်နယ် မရောနှောထားဖို့ပါ. တကယ် အလုပ် အခက်အခဲ တွေ့ရမယ် ဆိုရင် တောင် အချင်းချင်း ၀ိုင်း၀န်းဖြေရှင်းဖို့ နဲ့ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်နေရာရောက်ရင်လည်း ထားရှိစေချင်တဲ့စိတ်တွေကို ပြောချင်တာပါ နောက်ပြီး အလုပ်တစ်ခု၀င်မယ်ဆိုလည်း အဲဒီ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို သိထား စုံစမ်းလေ့လာပြီးမှ ၀င်သင့်တာပါ ဒီအခုပြောမယ့် ပြသနာကတော့ ယောကျ်ားလေးတွေမှာ သိပ်မရှိ်ပါဘူး မိန်ကလေး တွေမှာ အများ အားဖြင့် ကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းလေးတွေပါ. စီနီယာတွေက ဂျူနီယာတွေကို ပညာအမျိုးမျိုးပြတတ်ကြပါတယ် အချင်းချင်း ရာထူး နေရာ နာမည်ရဖို့အတွက် မှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ မဟုတ် ဘဲ အမျိုးမျိုးပညာပြပြီး ၇ယူဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ် အမှန်မှာ ဒီလို မလုပ်သင့်ပါဘူး စီနီယာတွေကလည်း ငါသာ ဂျူနီယာသာနေရာဆိုရင် ဆိုပြီး စဉ်းစားပေးပြီး ဂျူနီယာအနေနဲ့လည်း စီနီယာတွေကို လေးစားရမှာပါ. နှစ်ဦး နှစ်ဖက် မျှမျှတတ နေတတ်ရင် အလုပ်ခွင်က နေလို့ကောင်းတဲ့ နေရာလေး ဖြစ်သွားမှာပါ. အလုပ်မမြဲတဲ့ အကြောင်းတစ်ချက်မှာ အခု ကျနော် ပြောသွားတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကလည်း ပါ၀င်ပတ်သက်နေပါတယ် လို့.......